အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး - Newsway Valve Co., Ltd.
Newsway Valve Company မှထုတ်လုပ်သောအဆို့ရှင်များသည် ထုတ်ကုန်များ 100% အရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်းသေချာစေရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်အဆို့ရှင်များ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ISO9001 အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား တင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါသည်။ မူရင်းပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးသည် အရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများကို မကြာခဏ စစ်ဆေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ထုတ်ကုန်၏ခြေရာခံနိုင်မှုကိုအတည်ပြုရန် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခြေရာခံနိုင်မှုအမှတ်အသားရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ Drawing ပြုလုပ်ပါ၊ ရေးဆွဲခြင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
1. သွန်းလုပ်ခြင်းများကို အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း- ကာစ်များ စက်ရုံသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ MSS-SP-55 စံနှုန်းအတိုင်း ကာစ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမီ အရည်အသွေးပြဿနာများမရှိကြောင်း အတည်ပြုရန် မှတ်တမ်းများပြုလုပ်ပါ။ valve Castings အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်သွန်းလုပ်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် အပူကုသမှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
2.Valve Wall thickness test- Castings များကို စက်ရုံသို့ တင်သွင်းပြီး၊ QC သည် valve body ၏ နံရံအထူကို စမ်းသပ်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးနောက် သိုလှောင်မှုထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
3. ကုန်ကြမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ဝင်လာသောပစ္စည်းများကို ဓာတုဒြပ်စင်များနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက် စမ်းသပ်ပြီး မှတ်တမ်းများပြုလုပ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးနောက် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
4. NDT စမ်းသပ်မှု (PT၊ RT၊ UT၊ MT၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ရွေးချယ်နိုင်သည်)
1. စက်အရွယ်အစားစစ်ဆေးခြင်း- QC သည် ထုတ်လုပ်မှုပုံများအတိုင်း အချောထည်အရွယ်အစားကို စစ်ဆေးပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
2. ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း- ထုတ်ကုန်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ QC သည် ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
3. Valve အရွယ်အစားစစ်ဆေးခြင်း- QC သည် စာချုပ်ပုံများအတိုင်း အဆို့ရှင်အရွယ်အစားကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးနောက် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
4. Valve တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း- QC သည် API598 စံနှုန်းများနှင့်အညီ အဆို့ရှင်၏ကြံ့ခိုင်မှု၊ ထိုင်ခုံတံဆိပ်နှင့် အပေါ်တံဆိပ်အပေါ် ဟိုက်ဒရောလစ်စမ်းသပ်မှုနှင့် လေဖိအားစမ်းသပ်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။
သုတ်ဆေးစစ်ဆေးခြင်း- QC မှ အချက်အလက်အားလုံး အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက်၊ ဆေးသုတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပြီးသောဆေးကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးမှုစစ်ဆေးခြင်း- ထုတ်ကုန်ကို တင်ပို့သည့် သစ်သားသေတ္တာ (ထပ်သားသစ်သားသေတ္တာ၊ ဖော်မြူလာပြုလုပ်ထားသော သစ်သားသေတ္တာ) တွင် ခိုင်မာစွာထားရှိကြောင်း သေချာစေပြီး အစိုဓာတ်နှင့် ပြန့်ကျဲမှုကို တားဆီးရန် တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
အရည်အသွေးနှင့် ဖောက်သည်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ရှင်သန်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ Newsway Valve ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို ဆက်လက်မွမ်းမံပြီး မြှင့်တင်ကာ ကမ္ဘာနှင့်အမီလိုက်နေမည်ဖြစ်သည်။